डेढ ट्रक कवाडी सामान चितवन ट्राफिक प्रमुखद्वारा मुचुल्कै नउठाई सेटिङमा बिक्री
आईजीपी शैलेश थापाले प्रहरीमा सुधार गर्ने भाषण गरिरहेका बेला मातहतका प्रहरी हाकिमहरु भने झण्डै डेढ ट्रक कवाडी मोटरसाइकल र तिनका साइलेन्सर पाइपहरु मुचुल्का समेत नउठाई बिक्री गरी आम्दानी खल्तीमा हालेको समाचार छ । सन्दर्भ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनको हो । चितवन ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले २०७६ चैत पहिलो साता कारबाहीमा ल्याइएका पुराना मोटरसाइकल र साइलेन्सर पाइप कवाडीमा बिक्री गरियो । झण्डै डेढ ट्रक पुराना मोटरसाइकल र साइलेन्सर पाइप एउटा वर्कसपलाई बिक्री गरी आम्दानी बाँध्नुपर्नेमा त्यसो नगरी कार्यालयका प्रमुख इन्स्पेक्टर दयाकृष्ण भट्टले नै लिएको आरोप छ ।
चितवनमा ट्राफिक प्रहरी स्थापनादेखिकै दुर्घटनामा परेका मोटरसाइकल र कारबाहीमा परी झिकिएका साइलेन्सर पाइपहरु बिक्री गरिएको थियो । एक वर्कसपका मालिकले इन्स्पेक्टरलाई लाखौं रुपैयाँ दिएर तारजालीले घेरेर राखिएका त्यस्ता पुराना मोटरसाइकल र साइलेन्सर पाइपलगायत ट्रकमा हालेर लगेका थिए । ती सामान मोटरसाइकल र गाडी चोरीको कारोबार गर्ने भरतपुरको मनकामना वर्कसपका दीपेन्द्र श्रेष्ठ दीपुलाई बिक्री गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
आम्दानीसमेत नबाँधी मुचुल्का समेत नउठाई एक ट्रक पुराना मोटरसाइकल र पाइपहरु बिक्री गरिएको रकम इन्स्पेक्टर भट्टले अनियमितता गरेका छन् । केही हिस्सा अफिसक्लर्क हरेराम खतिवडालाई दिएर अरु सबै भट्टले खाएको आरोप छ ।
२० बर्षदेखिका पुराना सामान सुटुक्क बिक्री गरिएको थियो ? के कति सामान थियो, कतिमा बिक्री गरियो, मुचुल्का समेत उठाइएको छैन । मुचुल्का समेत नउठाई बिक्री गरिएको बिषयमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, आईजीपी शैलेश थापा, बागमती प्रदेशका डीआईजी बसन्त लामा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराई, चितवन जिल्ला प्रहरी प्रमुख नान्तीराज गुरुङकोमा लिखित उजुरी परेको छ ।
यसरी सम्बन्धित प्रायः सबै निकायमा मनोमानी ढंगले चितवन ट्राफिक प्रमुख इन्स्पेक्टर भट्टले मुचुल्कासमेत नउठाई बषौंदेखि जम्मा पारेर राखेको कवाडी सामान बेचेको लिखित उजुरी नै परेपछि आफू छानविनमा परी कारबाही हुने देखेपछि कारबाहीबाट जोगिन आफ्नो साथी नारायणगढ वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्स्पेक्टर रविनराज रेग्मीलाई तेरो मातहतमा कतिवडा कवाडी व्यवसायी छन् सबैबाट थर्काएर पुराना मोटरसाइकल र साइलेन्सर पाइपहरु उठाउन भनेपछि केही दिनदेखि त्यस्ता सामान बटुल्नतिर दुई इन्स्पेक्टरले आफ्ना विश्वास पात्रलाई खटाएका छन् । राती १० बजेपछि कवाडीहरुकोमा आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई पठाई जवरजस्ती पुराना मोटरसाइकल र साइलेन्सर पाइप उठाई आफूले मुचुल्कै नगरी पठाएको सामान जहाँबाट विक्री गरेका थिए त्यही जम्मा गर्ने काम केही दिनदेखि थालनी गरेका छन् ।
चितवन ट्राफिक प्रमुख इन्स्पेक्टर भट्ट झण्डै दुई वर्षअघि पूर्वी चितवनको इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरमा कार्यरत थिए । त्यहाँ पनि आफूले विक्री गरेका जस्तै सामानहरु चिनेका कवाडीहरुबाट उठाई आफूले २० वर्ष अगाडिदेखि जम्मा भएको कवाडीका सामान नबेचेको बनाउन रातारात उठाई रहेका छन् । त्यसरी सामान उठाई आफूले बेचेकै ठाउँमा थुपार्ने काममा उनका विश्वासपात्र खरेल थरका ट्राफिकलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यसको सेटिङ मिलाउन बागमती प्रदेशका प्रमुख डीआईजी बसन्त लामासँग आफू नजिक भएको भन्दै टेन्सन लिनुपर्दैन भनी विगत आठ वर्षदेखि चितवन ट्राफिकमा संचार र प्रशासन हेर्दै आइरहेका हबल्दार विश्व नेपालले गरिरहेका छन् ।
विचित्रको कुरा के छ भने चितवन ट्राफिक प्रमुख दयाकृष्ण आफू मदिरा सेवन नगर्ने भए पनि मदिरा संकलन गर्ने सोखिमका रुपमा परिचित छन् । यसरी संकलन गरेका मदिरा कसैकसैलाई खुसी पार्नका लागि कोशेलीको रुपमा दिने गर्छन् । यसरी रक्सी संकलन गर्ने काम इन्स्पेक्टर भट्टको नाममा हबल्दार विश्व नेपालले गर्ने गर्दै आइरहेका चितवन ट्राफिकहरुले नै बताउने गरेका छन् । इन्स्पेक्टर भट्ट आफूले मुचुल्कै नगरी बिसौं वर्षदेखि जम्मा भएको कवाडी बचेको उजुरी परेपछि कारबाहीबाट जोगिन विभिन्न उपायहरु अप्नाउन थालेका छन् । नारायणगढ वडा कार्यालयका प्रमुख इन्स्पेक्टर रेग्मी, जिल्ला ट्राफिक प्रमुख भट्ट, विगत १६ वर्षदेखि चितवनमा जरो गाडेर बसेका सई कृष्णजी ठकुरी र संचारका हबल्दार विश्व नेपाल दैनिक जस्तो मिटिङ र भेटघाट वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढ प्रमुख निरीक्षकको सरकारी क्वाटरमा बसी योजना बनाउने कार्य हुँदै आइरहेको वडा प्रहरी कार्यालयकै एक असन्तुष्ट प्रहरी अधिकारीले बताए ।
ट्राफिक प्रमुख इन्स्पेक्टर भट्ट र अफिसक्लर्क हरेराम खतिवडाले सट्याकसुटुक बिक्री गरेको बिषयमा अरु प्रहरीलाई चुप गराउन एउटा खसी ल्याएर भोज खुवाइएको थियो । सो भोजमा असई इन्द्र घिसिङ सहभागी भएनन् । निरीक्षक भट्टसँग उनको सम्बन्ध राम्रो छैन । यसैले उक्त कवाडी बिक्रीकाण्ड बाहिर नजाओस् भन्नका लागि इन्स्पेक्टर भट्टले अफिसक्लर्क खतिवडालाई डेढकिलो मासु घिसिङको घरमै पु¥याउन लगाएको बिषयले पनि चर्चा पाएको छ ।
सो घटना सई कृष्ण ठकुरीले थाहा पाए पनि बिरोध गर्ने अवस्था उनको छैन । ठकुरी दरबन्दी ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा भए पनि श्रीमती बिरामी भएको बहानामा २४ बर्षदेखि चितवन ट्राफिकमै कार्यरत छन् । दरबन्दी जहाँ भए पनि उनी चितवन ट्राफिकमै जागिर खाएदेखि नै कार्यरत छन् । पूर्वडीआइजी ज्ञानेन्द्रविक्रम महतको कृपाले ठकुरी सधैं चितवन ट्राफिकमा बसी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भएकाले इन्स्पेक्टर भट्टले जे गरे पनि चासो नदिई चुपचाप बस्ने गरेका छन् । चासो राखेको खण्डमा उनलाई दरबन्दी भएको बग्गीखानामै फर्काइदिने भयले पनि उनी चुप भएका हुन् । २४ बर्षदेखि कार्यरत उनको आफ्नै सम्बन्धका कारण मासिक एक डेढ लाख अतिरिक्त आम्दानी गर्दैआएकाले पनि बोल्न सक्ने अवस्था नभएको स्रोतले बतायो ।
यसैगरी, चितवन ट्राफिक अन्तर्गतका मुग्लिन, आँपटारी, गोन्द्राङ, जुगेडी, रत्ननगर टाँडी, भण्डारा, गीतानगर जस्ता पोष्टका इन्चार्जसँग पनि जिल्ला ट्राफिकका हाकिम भट्टले महिनावारी तोकेर घुस लिने गरेका छन् । मुग्लिनका इन्चार्ज सई ज्ञानबहादुर बाराकोटी छन् । त्यसपछिको सबैभन्दा बढी घुस असुली हुने आँपटारी पोष्टमा हवल्दार बाबुराम न्यौपाने छन् । ५ बर्षअघिको दशैंमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल गुल्मीबाट माइक्रोबसमा सर्वसाधारणसँगै फर्किदा आँपटारीमा विनागल्ती रोकेर घुस मागिएको बिषयले निकै चर्चा पाएको थियो । आँपटारीमा हवल्दार बाबुराम न्यौपाने छन् । भट्टलाई तोकिएको महिनावारी बुझाएर आँपटारी पोष्टमा पुगेका उनले बेला बेलामा पूर्वडीआईजी ज्ञानेन्द्रविक्रम महतको पनि सेवा गर्दैआएका छन् ।
तेस्रो महत्वपूर्ण मानिने गोन्द्राङमा सई अर्जुन भूसाल छन् । रत्ननगर टाँडीमा सई कृष्ण बिष्ट छन् । यी पोष्टबाट इन्स्पेक्टर भट्टले आफैं घुस संकलन गर्दैआएका छन् । लकडाउनमा सवारी साधन संचालन हुन सकेन । लकडाउनको अवधिमा ट्राफिकको मेसमा ८० हजार रुपैयाँ उधारो खाद्यान्न खरिद गरिएको थियो भने तेल समेत गर्दा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण पुगेको थियो । त्यो रकम समेत अहिले हाकिम भट्टले पोष्टहरुबाट माग्न निर्देशन दिएका छन् । र, अफिसक्लर्क खतिवडाले मुग्लिनदेखि जुगेडीसम्मका इन्चार्जसँग उक्त रकम मागिरहेका छन् । लकडाउनमा गाडी नै नचलेकाले उनीहरुको असुली पनि रोकिएकाले दिन नसक्ने भनेपछि द्धन्द्ध चर्किएको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका इन्स्पेक्टर भट्टले कार्यालय परिसरमा रहेको सामान मुचुल्का नउठाई बिक्री गरिएको बारेमा चितवनका एसपी नान्तिराज गुरुङ, बागमती प्रदेश ट्राफिकका प्रमुख प्रकाश रानाभाट बेखबर भएका हुन् कि उनीहरु पनि मिलेका छन् ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । २०७० मा प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका भट्ट सोह्रखु्ट्टे ट्राफिकको प्रमुख भए । सोह्रखुट्टेले दरबारमार्गसमेत हेर्ने गर्दथे । त्यसपछि चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएका भट्ट सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालको अन्तिम समयमा चितवन ट्राफिकको इन्चार्जमा काजसरुवा भएका हुन् । ट्राफिकमा बसेर कुस्त आम्दानी हुने बुझेका उनी तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईकी निजी सचिव राधा श्रेष्ठको जोडमा चितवन ट्राफिकको प्रमुखमा सरुवा हुन सफल भएको भन्ने गर्दछन् । राधा श्रेष्ठ विवादास्पद अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालमा हालीमुहाली गर्नेहरुको सूचीमा पर्दछिन् ।
अख्तियारमा त्यतिबेला डीएसपी दानबहादुर थापा, एसएसपीबाट अवकाशपछि अमेरिका पलायन भएका र लोकमानको उदयपछि नेपाल फर्किएर सुरुमा बगैंचे र पछि सचिवालयमा रजगज गर्ने गोबद्र्धन श्रेष्ठसँगै राधा श्रेष्ठको नाम पनि आउने गर्दथ्यो । तिनै राधा श्रेष्ठमार्फत् भट्ट चितवनको ट्राफिक प्रमुख भएको सगौरब बताउने गर्दछन् । उनलाई नियमित सरुवा नगरी खनालले काजसरुवा गरेका थिए ।
स्मरणीय छ, विगतमा दुई सय रुपैयाँ घुस खाएका ट्राफिक हबल्दार दिपक पुरीलगायतलाई तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलल छानविन गरी निलम्बन गर्न लगाएका थिए । तर, चितवन ट्राफिक स्थापना भएदेखि हालसम्म कारबाही स्वरुप ल्याईएका झण्डै डेढ ट्रक सामान रातारात कवाडीलाई बिक्री गरेको लिखित उजुरी सम्बन्धित सबै निकायमा पर्दा पनि अहिलेसम्म निज निरीक्षक भट्टलाई कारबाहीका लागि निलम्बन त परै जाओस् छानविनका लागि बागमती प्रदेशका प्रमुख डीआईजीले तान्ने हिम्मतसमेत गरेका छैनन् । जबकी एक निर्माण ठेकेदारसँग हटौंडामा १२ हजार रुपैयाँ घुस लिएको उजुरी परेपछि इप्रका भैंसेका निरीक्षक राम बालक रायलाई डीआईजी लामाले निलम्बनको लागि सिफारिस गरेपछि प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । १२ हजार घुस काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निरीक्षक रायविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्ट्राचार मुद्दा गरेको छ ।
तर, झण्डै २० वर्ष अघिदेखि कारबाही स्वरुप संकलन गरिएका डेढ ट्रक कवाडीका सामान रातारात विक्री गर्ने निरीक्षक दयाकृष्ण भट्टविरुद्ध किन छानविन र कारबाही हुँदैन ? इमान्दार प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष प्रश्न उठेको छ ।- खोजतलास